एउटा कुकुर र हाती एकै पटक गर्भवती भए । गर्भवती भएको दुई महिना पछि कुकुरले आधा दर्जन छाउरा पायो । त्यसको केही महिना पछि फेरि कुकुरले बच्चा पायो । हाती जस्ताको त्यस्तै छ । कुकुरले फेरि केही महिना पछि फेरि तेस्रो पटक बच्चा पायो । तर हाती फेरि पनि उस्तै छ ।
कुकुरले बडो फूर्तिका साथ हाती नजिक पुगेर भन्यो; “हैन ए हाती, तिमी त गर्भवती भएको होइन कि के हो ? हेर त मैले तीन तीन पटक बच्चा पाइसकें । सबै हुर्किएर ठुला, जंगे कुकुर बनिसके । तर तिम्रो त केही चालचुल छैन त ?”
हातीले मुसुक्क हाँस्दै भन्यो “हेर, तिमीले दुई महिनामा झन्डै आधा दर्जन बच्चा पाउँछौ । तर, म झन्डै दुई वर्ष लगाएर बल्ल एउटा बच्चा पाउँछु । तर, जब मेरो बच्चा जन्मन्छ, धर्तीले स्पर्शको महसुस गर्छ । मेरो बच्चाले बाटो काट्दा सयौं मानिसहरु गाडी रोकेर हेर्न लालायित हुन्छन, क्यामरामा कैद गर्न उत्सुक हुन्छन । मेरो मात्र होइन, लामो समयसम्म धैर्यता राख्ने सबैको प्रतिफल महत्वपूर्ण हुन्छ !”
कहिले काहीं छिमेकी, साथीभाई, आफन्तले फटाफट प्रगति गरेको देखेर मन खिन्न बनाउन हुदैन । धैर्यता गर्न सिक्नु पर्छ । हरेक व्यक्तिको दिन आउँछ । आफूलाई विस्वास गर्न सक्नु पर्दछ । पर्खन जान्नु पर्छ । आफ्नो लक्षबाट विचलित बन्नु हुँदैन । जब धैर्यवान र आफ्नो लक्षमा लगनशील व्यक्तिले सफलता चुम्छन, त्यो हीरा भन्दा बढी महत्वपूर्ण र मूल्यवान हुनेछ !
प्रकाशित मिति April 2, 2020